महिला लघुवित्तको चौथो त्रैमाससम्मको नाफा ९ करोडभन्दा बढी - Aarthiknews
महिला लघुवित्तको चौथो त्रैमाससम्मको नाफा ९ करोडभन्दा बढी
काठमाडौं । महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म रू. ९ करोड २९ लाख ८२ हजार खुद नाफा गरेको छ । गत फागुन १४ गते सर्वसाधारणमा आईपीओ बाँडफाँट गरेको कम्पनीले अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष १६७ दशमलव ८६ प्रतिशत बढी खुद नाफा गरेको हो । अघिल्लो वर्ष सो अवधिसम्म कम्पनीको यो नाफा रू. ३ करोड ४७ लाख १३ हजार थियो ।
गत वर्ष कम्पनीको सञ्चालन नाफा पनि १७७ दशमलव ८८ प्रतिशत बृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष रू. ३ करोड ८१ लाख ७६ हजार सञ्चालन नाफा गरेको कम्पनीले गत वर्ष रू. १० करोड ६० लाख ८५ हजार यो नाफा गरेको हो । सम्भावित जोखिम शिर्षकमा अघिल्लो वर्षभन्दा १४६ दशमलव ३३ प्रतिशत बढी रू. १० करोड २२ हजार रकम छुट्याउदा पनि कम्पनीको सञ्चालन नाफासँगै खुद नाफामा उल्लेख्य बृद्धि भएको छ ।
गत वर्ष खराब कर्जा संकलनले पनि कम्पनीको नाफा बढ्न सहयोग मिलेको हो । अघिल्लो वर्ष रू. १ करोड ७० लाख २७ हजार खराब कर्जा संकलन गरेको कम्पनीले गत वर्ष १४३ दशमलव ७७ प्रतिशत बढी रू. ४ करोड १५ लाख ६ हजार यो कर्जा उठाएको हो । जसका कारण कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी अघिल्लो वर्ष रू. १२ करोड ८२ लाख ८२ हजार भएकोमा गत वर्ष ८७ दशमलव ४६ प्रतिशत बढी रू. २४ करोड ४ लाख ८३ हजार भएको छ ।
आईपीओ पश्चात कम्पनीको चुक्तापूँजी १० करोड पुगेको छ । गत वर्ष कम्पनीको जगेडा कोष रकम पनि ७२ दशमलव ७२ प्रतिशत बृद्धि भर्ई रू. २२ करोड ८ लाख ९६ हजार कायम भएको छ । कम्पनीले १२१ दशमलव ९४ प्रतिशत बढी रू. २ अर्ब २४ करोड ६८ लाख ७३ हजार कर्जा सापटी लिएर ९१ दशमलव ९६ प्रतिशत बढी रू. ३ अर्ब ३३ करोड ६७ लाख ८५ हजार कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष कम्पनीको निक्षेप संकलन भने साढे ४० प्रतिशत बढी रू. ९२ करोड ८० लाख ९० हजार भएको छ । कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा अघिल्लो वर्ष शून्य दशमलव ७८ प्रतिशत रहेकोमा गत वर्ष १ दशमलव ७१ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष रू. ५७ दशमलव ८६ रहेको कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी गत वर्ष रू. ९२ दशमलव ९८ छ ।